Mahomby Ve Ny Fanasaziana Ara-Toekarena ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2014 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Català, Deutsch, English, Italiano, Español, Français
Christian Chavagneux, lehibe lefitry ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Alternatives Economiques, nampatsiahy fa sarotra ny mampahomby ireo sazy ara-toekarena :
Manome rariny an'ny Eastery ny tohin'ny zava-nitranga. Tafalatsaka anaty krizy ara-toekarena lalina i Madagasikara kanefa tsy iharan'izany ireo tompon'andraikitra tamin'ny krizy politika ary mbola eo amin'ny fahefana ry zareo 5 taona taorian'ny fanonganam-panjakana. Hita mifamahofaho eny an-tanàndehibe sasany ny fiara tsy mataho-dalana nomena ireo olom-bitsy kanefa miha-mahantra haingana ny ankamaroan'ny mponina. Tamin'ny 2013, miaina amin'ny 2 dolara isan'andro ny 90%n'ny Malagasy.
Taorian'ny fakàm-pahefana nataon'ny Kapiteny Sanogo sy ny tafiny tamin'ny taona 2012, nanambara sazy avy hatrany ny fiarahamonina iraisam-pirenena ary nanaisotra ny fanampiany amin'ny fampandrosoana an'i Mali. Saingy miharatsy haingana dia haingana ny toe-draharaha noho ny fisintahan'ny avaratry ny firenena nataon'ireo vondrona mpikomy sy ny fanombohan'ny firotsahan'ny miaramila iraisam-pirenena an-tsehatra, notarihin'i Frantsa.
Tsy misy adihevitra ny tatitra farany avy amin'ny PNUD sy ny minisiteran'ny fanampiana maha-olona Maliana milaza ny fiantraikan'ireo sazy amin'ny toekarena ao amin'ny firenena sy ny fiankinan'ny firenena amin'ny fanampiana hoan'ny fampandrosoana :